Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ka qaaday Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ka qaaday Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan...
Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ka qaaday Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax
Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ka qaaday Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax oo kamid musharaxiinta u taagan qabashada hoggaanka Hirshabeelle.
Illo xog ogaal ah ayaa ii xaqiijiyay in Diyaarad qaas ah oo Villa Soomaaliya aay usoo dirtay Jowhar looga qaaday Cabdi Fitaax Xasan Afrax isla markaana lageeyay magaalada Muqdisho.
Lama oga ujeedka rasmiga ah waxaana durba soo baxayay warar is qilaafsan oo ku aadan qaadistiisa Villa Soomaaliya ee aay jowhar ka qaaday Cabdi Fitaax Xasan Afrax.
Wararka qaar ayaa tibaaxaya in Villa Soomaaliya aay dooneeyso in aay soo afjarto hammiga mr Afrax ee ahaa in madaxweyne ama madaxweyne ku xigeen uu ka noqdo Hirshabeelle,halka warar kalane aay ku waramayaan in Cabdi Fitaax laga yaabo in laga gado Madaxweyne Farmaajo oo loo ogolaado in hoggaanka hirshabeelle loo dhiibo.
Cabdi Fitaax Xasan Afrax ayaa dhawaan sheegay in muddo 48-saac gudaheed uu ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa mid kamid ah labada hoggaan ee Hirshabeelle,balse sida muuqata ka hor inta uusan ku dhawaaqin ayaa Muqdisho la geeyay.
Sida wararkii ugu dambeeyay lagu helayo Villa Soomaaliya ayaa dooneeysa in madaxweyne Hirshabelle aay ka dhigto Cali Guudlaawe Xuseen halka calaamad Su’aal saarantahay cidda noqoneeysa Madaxweyne ku xigeena u Hirshabeelle.
Cabdi Fitaax Xasan Afrax oo xariir aan la sameeyay iima aaysan suura galin in aan helo haya yeeshee qaar kamid ah Taageerayaashiisa ayaa ku warramaya in guddoomiye Cabdi Fitaax Xasan Afrax oo madaxtooyada kulan kula qaatay Taliyaha NISA iyo Madaxweynaha Soomaaliya maalinta berri ahne uu dib ugu laaban doono magaalada Jowhar.
Previous articleFahad iyo Qatar yey Sanadkan la rabaan Madaxtinimada Somalia Farmaajo iyo Xasan Sheekh ?
Next articleWar deg deg ah Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho
Magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle ka bilaaban doono manta...
Maanta oo Isniin ah ayaa waxaa la filayaa in Magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle uu ka bilaawdo diiwaangelinta musharixiinta Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas...
Abiy Axmed: ‘Howlgalka milateri wuu sii socon doonaa tan iyo inta...
Ilhaan Cumar oi ku guuleysatay markale doorashada Aqalka Hoose ee Mareykanka